🥇 ▷ iPhone 11 Diiwaangelinta Deg Degga ah ✅
iPhone 11 Diiwaangelinta Deg Degga ah
Wax cusub oo ka cusub iPhone hore oo leh nidaamka kamaradaha cusub iyo nolosha batteriga oo hagaagtay iPhone 11 Ma qorshaynaysaa inaad guurto In kasta oo batariga iPhone uu si weyn u soo fiicnaaday 5W xamuul qajaar ah way adkaan kartaa in lagu dallaco batteriga.
Toddobaadkii hore la soo bandhigay, iPhone 11 wuxuu la imaanayaa 5W xeedho. Apple In kastoo gambaleelka duugga ah oo gaabis ah lagu ridayay sanduuqa, waxay kordhisay awoodda bateriga. Ku dallacaya bateriga adoo adeegsanaya badhanka ku kacaya qalabka ‘iPhone 11’s 5W’ 3 saacadood waqti ayey qaadataa.
Dhibaatadani maahan haddii aad telefoon ku dallacdo habeenkii, laakiin haddii si dhakhso ah aad u dallacdo, duruufo badan ayaa la hagaajin karaa. Taasi waa sababta Applealso 18W Xamuulka USB-C iyo USB-C. iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max Apple, iPhone 11’de waxay kuxirayaan isticmaaleyaasha adabtarada 5W.
18W xeedho leh qiyaastii. 1.5 saacadood batteriga loogu talagalay iPhone 11 12W xamuul Waad dooran kartaa. Hadaad leedahay iPad iPad, sanduuqan waxaa kujira 18W adapter inbadan raqiis ah Sidoo kale waa in la ogaadaa. Dhanka kale, shirkadda caanka ah ee “MacBook’s 87W charger” ayaa si aan kala go ‘lahayn kula shaqeyn doonta iPhone-ka, laakiin ha filan inaad si dhakhso leh u dallacdo.
Applehas waxay biloowday taariikh cusub iyagoo ku dallacaya koronto xoog leh iPhone 11 Pro. Laga yaabee sanadka soo socda Apple inay deeqsinimo u noqon doonaan inay ku soo daraan ah adauter degdeg ah oo dhan iPhones cusub sidii caadiga ahayd.